- Page 129 of 199 - Ayyaantuu Online
Ethiopia’s war on terror must end before it’s too late The so-called war on terror has deformed the Ethiopian state and society. The social fabric as a result has been badly frayed with widespread extrajudicial killings and torture. Can anything… Read More »
Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Qormaatota kaleessaa, kan har’aa fi kan boruu – Berhanu Hundee, Ebla 24, 2018 Kutaa Kudhalammaffaa Haasa’a adda addaa Muummichi Ministeerotaa (MM) Dr Abiyi godhaa ture laalchisee tibba kana waa baay’eetu dubbatamaa… Read More »
Afuuffiin Madaa Hin Fayyisu Damee Boruu: 4/24/2018 Mootonni Habashaa uummata garboofachaa jiran malaamaltummaa adda addaan bara baraan gowwoomsuuf tattaaffii gochaa jiran hubachuun rakkisaa miti. Bara Dargii “nama kan nama godhe hojii” kan jedhu imaamata komunistota ture. Imaamatni TPLF immoo sobuu,… Read More »